အဌမတန်း အောင်မြင်သူများ အာဆီယံ ပညာသင်ဆု လျောက်ထားနိုင် - News @ M-Media
in ပညာရေး — April 13, 2017
ဧပြီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၇
၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရှိ အခြေခံ ပညာအလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်း၊ ပုဂလိကကျောင်း(ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းဖြင့်သင်သည့် ကျောင်းအားလုံး) တို့မှ အဌမတန်း အောင်မြင်ထားသူများ အာဆီယံပညာသင်ဆု လျောက်ထားနိုင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
လျှောက်ထားသူသည် အဌမတန်း အောင်မြင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိစာ ကောင်းမွန်ပြီး သင်္ချာ နှင့် သိပ္ပံထူးချွန်သူဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူများသည် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးများသို့ ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပညာသင်ဆုအတွက် ပဏာမ ရေးဖြေစာမေးပွဲကို(၁၁ . ၅ . ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း နဲ့ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးက သတ်မှတ်ပေးသည့် ကျောင်းများတွင် ဖြေဆိုရပါသည်။
အာဆီယံ ပညာသင်ဆု ပဏာမရေးဖြေ အောင်မြင်သူများကို(၂၆ . ၅ . ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကြေငြာမည် ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်(၂၈. ၅ .၂၀၁၇)( ၃၀ .၅ .၂၀၁၇)ရက်နေ့အတွင်း ပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာပုံစံ ဖြည့်စွက်ရပါမည်။
အာဆီယံ ပညာသင်ဆု ပဏာမရေးဖြေ အောင်မြင်သူများကို၂၀၁၇ ဇူလိုင်လတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ လာရောက်၍ ရေးဖြေ စာမေးပွဲ ထပ်မံ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံ ပညာသင်ဆု ထပ်မံ ရွေးချယ်ခံရသူများကို၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလတွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းကိုထပ်မံ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူအစိုးရက ပညာရေးတွင် ထူးချွန်သော မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို အာဆီယံပညာသင်ဆုပေးအပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာပြီး ရွေးချယ်ခံ ရသူများသည် စင်ကာပူအစိုးရ ကျောင်းများတွင် Secondary Three မှာ Pre-University အဆင့်ထိ လေးနှစ် ပညာသင်ကြားခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကိုးကား- စံတော်ချိန်သတင်းစာ၊ Thein Win Oo FB
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ Website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။